Semalt Expert dia mamelabelatra amin'ny Form Caldera, The Plugin Powerful indrindra ho an'ny WordPress Sites
Mampikorontana sy mampiahiahy ny kaonty mifandraika amin'ny fifandraisana ary miteraka lozam-pifamoivoizana maro ao amin'ny bilaoginao na tranokala. Noho izany, ny fanakanana spam sy ny fitazonana ny fifandraisana aminao dia tokony ho laharam-pahamehana ho anao raha mampiasa ny Formula Caldera ianao. Artem Abgarian, Semalt Mpitarika Success Manager ao amin'ny Semalt, dia manazava fa mba hahafahanao mamolavola programa manaparitaka sy matanjaka ho an'ny fifandraisana, dia tokony mamorona endrika vaovao tanteraka ianao. Raha vantany vao vita izany, ny fitaovam-piadiana manohitra ny spam dia hiasa mba hitazonana ny endriny malalaka amin'ny fanesorana spam sy bot.
Inona no tokony hataonao raha toa ianao mampiasa spam na Caldera Forms?
Raha mampiasa ny Plugin honey ianao amin'ny alàlan'ny Caldera Forms ianao ary tsy miasa araka ny tokony ho izy, dia misy fomba sasany ahafahana manala ny spam avy hatrany:
Voalohany indrindra, tokony aleonao mampiasa mampiasa WordPress mpikorisa mahomby sy voalamina izay miaro ny sakana rehetra sy ny sponjy rehetra tsy ho tonga amin'ny tranonkalanao. Manoro hevitra anao izahay hampiasa WPEngine sy Pantheon amin'io lafiny io.
Azonao atao koa ny mampiasa ny serivisy mailaka izay manakana ny spam. Manoro hevitra anao izahay Caldera Forms Pro ho an'ny endrika Caldera sy SendGrid ho an'ny mailaka hafa rehetra..
Tsara ihany koa ny manohana ny fampiasana tranonkala fanesoana. Ao amin'ny Wordpress Plugin Directory an-jatony dia misy plugins anti-spam an'arivony maro, ary afaka mifidy plugin ianao ary mametraka azy ireo haingana araka izay tratra.
Ahoana ny momba ny saha reCaptcha?
Tsara ihany koa ny mahazo ny reCaptcha ary manakana ny fanehoan-kevitra amin'ny spam ao amin'ny tranonkalanao. Mety tsy mety amin'ny Caldera Forms izy io ka tsy maintsy manitsy ny sehatr'izy ireo ianao. Azo antoka ny filazana fa ny reCaptcha dia tsy dia mahomby ary mahasoa kokoa noho ireo plug-in misy anti-spam voalaza etsy ambany.
Nametraka fanoherana ny Caldera:
Raha manana tranonkala WordPress ianao, dia tsy maintsy mametraka ity plugin ity haingana araka izay tratra ianao mba hisorohana ny Caldera Forms amin'ny spam sy viriosy. Ity dia plugin-n'ny mpividy iray izay mora ampiasaina amin'ny tranonkala izay tsy misy vidiny ary misy karazany am-polony. Ampiasao izany, azonao atao ny mahazo ny torolalana amin'ny antsipirihany momba ny fomba hampivoarana endrika fifandraisana mahafinaritra. Ity plugin ity dia manolotra ny tranokala fanintelony, ny safidy mivantana, ny sasantsasany hanatsarana ny endriky ny famoronana, ary manampy amin'ny famolavolana fitarafana ao anatin'ny segondra.
Diovy fanadiovana Anti-Spam:
Ity plugin WordPress ity dia azo ampidinina mora foana amin'ny Caldera Forms ary manampy amin'ny fisorohana spam ao amin'ny fizarana tsetsatsetsa. Ny ampahany tsara indrindra dia ny miditra amin'ny dikan-teny maimaim-poana sy avo lenta; Midika izany fa tsara ho an'ny orinasam-barotra madinika sy blôginao manokana ny dikan-teny maimaim-poana ary ny avo lenta dia tsara ho an'ny tranokala lehibe sy marika an-tserasera. Azonao atao ny manova ny endriny efa misy ary mamela azy ireo hanana endrika mahagaga sy mahatalanjona.
Izany dia Plugins feno sy mahasoa ho an'ny Caldera Forms. Manome tolotra maimaimpoana maimaim-poana izy ary manana fametrahana an-tapitrisany an-tapitrisany amin'ny aterineto. Azo atao ihany koa ny manova ny Form Contact 6 amin'ny fampiasana ity plugin ity, ary mora ampiasaina izany. Ankoatr'izany, misy ny fanitarana maro azo ampiasaina ho an'ireo mpampiasa, ary azonao atao ny mampifanaraka an'io plugin io araka izay takinao sy andrasanao. Izy io koa dia ahitana ny fanohanana reCaptcha ary afaka miandraikitra ny faneken'ny baiko Ajax ho anao Source .